Ejiri akwukwo Scrum Master - ITS Tech School
Scrum Master Ọzụzụ
2-2 Days Workshop maka PSM, PSPO. Obere oche !!!
Ajụjụ ọsọ ọsọ?
Gịnị Dị Mkpa Maka Agụmakwụkwọ?
Scrum bụ usoro nke ndị mmadụ nwere ike idozi nsogbu mgbagwoju anya, ebe ha na-arụpụta ihe ma na-emepụta ngwaahịa nke uru kachasị elu.
Ọkachamara Scrum Certifications (Gosi ndị ọrụ na ndị ọgbọ gị ihe isi gị na Ọganihu Scrum na-aga n'iru. Onye ọ bụla nke na-achọ akwụkwọ edemede Scrum nwekwara ike mezue ọzụzụ ha)
Mmekọrịta mmekọrịta site na ndị na-enye ọzụzụ ọkachamara (Nhazi ọmụmụ ihe na-eme ka mmụta mmụta ahụ dịkwuo mma, Ọzụzụ nke ndị ọkachamara na-esite na ITRA kwadoro - ndị kacha mma na Scrum!)
Ọganihu Ọrụ (Mụbaa ohere ọrụ gị site na ịkwado onwe gị n'ihu ahịa na mpaghara ụlọ ọrụ niile na-eme ihe ndị a na-eme. Ndị òtù team Scrum dịka ndị mmepe & ndị nwe ngwaahịa nwere ike ịmụta banyere PSM na PSPO)
Ihe Ọmụmụ Ihe
Nghọta doro anya banyere iwu Scrum
Mee ka Scrum Masters maka Team Scrum na ndị nwe obodo
Mee ka Scrum dị irè
Ikwuwanye uru nke ngwaahịa na sistemụ ngwanrọ
Ịghọta ụkpụrụ nke njikwa oru ngo
Ịkwụ ụgwọ ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke nwe
Ngwá ọrụ dị mma site na ịrụ ọrụ
Ọrụ Scrum Certifications Training
A na-enweta akwụkwọ ikikere PSM I, II na nke III na inweta nkwụsị nke kachasị elu na nyocha nke siri ike, nke a na-enwe na ntanetị.
PSM m na-ejide ịghọta ihe ndị dị na ya, ma nwee ike iji ụwa nabatara usoro okwu na ịbịaru Scrum.
Ndị PSM II nwere nghọta miri emi banyere ụkpụrụ na usoro ndị na-eme ka Scrum kpuchie ya ma nwee ike itinye Scrum n'ọrụ n'ụzọ dị mma.
Ogwe akaebe PSM III gosipụtara ọkwa dị elu nke Scrum.
Ihe nyocha online nke PSPO bụ nyocha nke siri ike ma chọọ nkwụsị nke kachasị elu iji nweta mmezu.
PSPO M ga-agafe tupu ị nwaa ọtụtụ ihe siri ike
PSPO II. Ozugbo ịkụziri ọzụzụ (Scrum.org), ụmụ akwụkwọ ga-enweta ozi-e na-enye paswọọdụ ha iji nwalee nyocha nyocha. Ọ bụrụ na onye a na-amụrụ ihe natara nyocha ahụ n'ime ụbọchị 14 ma ọ bụghị akara 85%, ha nwere ikike inweta mgbalị 2nd na-efu. A ga-ezigara e-mail 2nd na paswọọdụ ọhụrụ na-akpaghị aka na nwa akwụkwọ.
Achọpụtara maka ihe kacha mkpa
Ike nchebe zuru ezu iji mejuo ihe kachasị mkpa nche ozi.
Wụpụta ụlọ ọrụ IT ndị na-eme ka ụlọ ọrụ gị banye na Cloud.
Njikwa bara ọgaranya, nyocha na nkwenye ezumike. kedu ihe mere anyị ji ejere ndị ahịa anyị mma?